Chelsea Oo Isha Ku Haysa Difaac Ay Si Fudud Ku Heli Karo Kana Ciyaara Horyaalka Itaaliya
HomeHoryaalka IngiriiskaChelsea oo isha ku haysa difaac ay si fudud ku heli karo kana ciyaara horyaalka Itaaliya
Chelsea ayaa isha ku heysa xaalada qandaraaska daafaca dambeedka dhexe ee AC Milan Alessio Romagnoli, sida lagu sheegay warbixin.
Wuxuu galayaa 18-kii bilood ee ugu dambeysay heshiiskiisa San Siro, taasoo la micno ah in Rossoneri ay ku qasban tahay inay go’aan kama dambays ah ka gaarto mustaqbalkiisa dhawaan.
Xiddiga reer Talyaani ayaa AC Milan ku sugnaa inta badan waayihiisii ​​ciyaareed ee waayeelnimo wuxuuna haatan u shaqeeyaa sidii kabtankooda.
Sidaa darteed, Alessio ayaa wali ah laacib muhiim u ah iyaga, laakiin ma doonayaan inay ku lumiyaan qiimo jaban.
Taasi waxay noqon kartaa mid aan laga fursan karin haddii Alessio uusan ugu dhowaan qalinka ku duugin qandaraaska cusub.
Sidaa darteed, illaa iyo inta uu daafaca sameynayo heshiis cusub, waxaa jiri kara fursad ay haysato kooxda Blues.
Sida laga soo xigtay 90min , reer galbeedka London waxay aad u xiiseynayaan Romagnoli.
Frank Lampard wuxuu doonayaa inuu xoojiyo daafaciisa, xitaa kadib markii uu caga dhigtay Thiago Silva xagaaygii hore.
Xiddigii hore ee AC Milan iyo Paris Saint-Germain ayaa ka caawiyay inay horumariyaan nasiibkooda dhanka daafaca, laakiin waa xal muddo gaaban ah. Sidaa darteed, Blues weli waxay raadsan kartaa daafac tayo buuxa leh.
Warar hore ayaa sheegaya in Raphael Varane uu ka yimid Real Madrid, laakiin 90min ayaa sheegeysa in Alessio uu ku jiro ajandaha.
Lampard ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay saraakiisha Blues inay la socdaan xaalada Romagnoli. Wuu xiiseyn lahaa fursad uu kula soo saxiixan karo 25 jirka qiimaha jaban.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Chelsea ay sidoo kale isha ku heyso goolhayaha Milan Gianluigi Donnarumma, kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo xitaa xilli hore ee dhamaadka xilli ciyaareedkan.